Arch Linux + KDE Installation Log: KDE SC Rakibaadda | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan horay u aragnay sida rakibi Arch Linux oo diyaari nidaamka, haddaba hadda waa waqtigii la rakibey lahaa KDE oo ah Degaanka Desktop-ka aan isticmaalo.
Waxa ugu horreeya ee aan ku rakibeyno waa xirmooyinka la xiriira Xorg. Maaddaama qof kastaa leeyahay baahiyihiisa, waxa ay tahay inay sameeyaan waa fulinta:
Tani waxay soo celin doontaa liiska xirmooyinka la xiriira Xorg sida tan:
:: Waxaa jira 77 xubnood oo ka tirsan kooxda xorg: :: Keydka dheeraadka ah 1) font-misc-ethiopic 2) xf86-input-evdev 3) xf86-input-joystick 4) xf86-input-keyboard 5) xf86-input-mouse 6) xf86-input-synaptics 7) xf86-input-vmmouse 8) xf86-input-void 9) xf86-video-ark 10) xf86-video-ast 11) xf86-video-ati 12) xf86-video-cirrus 13) ) xf86-video-dummy 14) xf86-video-fbdev 15) xf86-video-glint 16) xf86-video-i128 17) xf86-video-intel 18) xf86-video-mach64 19) xf86-video-mga 20) xf86 -video-qaabeynta 21) xf86-video-neomagic 22) xf86-video-nouveau 23) xf86-video-nv 24) xf86-video-openchrome 25) xf86-video-r128 26) xf86-video-savage 27) xf86 - video-siliconmotion 28) xf86-video-sis 29) xf86-video-tdfx 30) xf86-video-trident 31) xf86-video-v4l 32) xf86-video-vesa 33) xf86-video-vmware 34) xf86- video -voodoo 35) xorg-bdftopcf 36) xorg-docs 37) xorg-font-util 38) xorg-fonts-100dpi 39) xorg-fonts-75dpi 40) xorg-fonts-encodings 41) xorg-iceauth 42) xorg- luit 43) xorg-mkfontdir 44) xorg-mkfontscale 45) xorg-server 46) xo rg-sessreg 47) xorg-setxkbmap 48) xorg-smproxy 49) xorg-x11perf 50) xorg-xauth 51) xorg-xbacklight 52) ​​xorg-xcmsdb 53) xorg-xcursorgen 54) xorg-xdpyinfo 55) xorg-xdriinfo 56) xorg-xev 57) xorg-xgamma 58) xorg-xhost 59) xorg-xinput 60) xorg-xkbcomp 61) xorg-xkbevd 62) xorg-xkbutils 63) xorg-xkill 64) xorg-xlsatoms 65) xorg-xlsclients 66) xorg-xmodmap 67) xorg-xpr 68) xorg-xprop 69) xorg-xrandr 70) xorg-xrdb 71) xorg-xrefresh 72) xorg-xset 73) xorg-xsetroot 74) xorg-xvinfo 75) xorg-xwd 76) xorg-xwininfo 77) xorg-xwud Gali xulasho (asal = waa dhan):
Kaliya waa inaan dooranaa kuwa aan dooneyno waana intaas, annaga oo lambarka ka hor dhigeyna waxa aan dooneyno inaan rakibno. Marka laga hadlayo in ka badan hal ikhtiyaar, waxaan sameyneynaa xulashooyin badan oo kala soocaya nambarrada iyo kooma.
Hadda si loo soo dajiyo KDE waxaan ku sameyn karnaa 3 qaab
Tani waxay rakibi doontaa xirmooyinka toooooodoooossss KDE. Xulashadani wax badan ayey ku qaadaneysaa dhammaan xirmooyinka aad u baahan tahay inaad soo dejiso, laakiin waxay naga tagi doontaa Deegaanka Desktop-ka oo diyaar ah, wax walboo aan u baahanahay iyo xitaa wixii aanan u baahnayn.
Xulashadani waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno wax yar oo aan dooneyno inaan rakibno, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan doorano xirmooyinka meta ee la xiriira howlaha kala duwan ee KDE. Tani waxay ahayd qaabkii aan adeegsaday wax walbana way ii shaqeeyeen markii iigu horreysay.
Haddii aan ognahay waxa aan dooneyno iyo waxa aan u baahannahay inaan mar dambe rakibno, xulashadani waxay ku imaaneysaa mid waxtar leh maxaa yeelay waxay rakibaysaa oo keliya waxa lagama maarmaanka ah si KDE si sax ah ayuu u shaqeeyaa Kadibna waxaan rakibi doonnaa xirmooyinka aan adeegsan doonno.
Ka waran haddii aanaan ilaawin karin waa inaan xirmada xirno oo aan la wadaagno mid ka mid ah xulashooyinkaan:
Hada maxaa loo qabtay KDM bilaabaan waa in aan dhaqaajino adeegga:
Waana taas. Waxaan dib u bilaabi oo waxaan geli karnaa kuweenna KDE.
Aalado kale oo waxtar leh
Marka KDE la dhammeeyo, qof walba waa inuu sii wadaa inuu rakibo xirmooyinka ay u baahan yihiin. Xaaladdayda, waxaa jira codsiyo badan oo aan isticmaalo, oo aan hoos ku taxo:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Arch Linux + KDE Rakibaadda Diiwaanka: KDE SC Rakibaadda
Sir badan dijo
Su’aal; Waxa aad rakibtay waa binaries ama miyaad soo degsataa ili oo aad soo ururisaa? Waan ka xumahay haddii aan weydiisanayo run, laakiin ma aqaano waxa loo yaqaan 'distro' iyo waxa aan maqlay waa inay tahay in la isku soo ururiyo qaabka 'gentoo'.
Binary. Isku-ururintu waa ikhtiyaari, iyadoo la adeegsanayo qoraallo fudud oo dhisme ah, oo aan xallin karin ku-tiirsanaanta, mana qabanayso xulashooyinka isku-duwidda; taasi waa, macno ahaan maahan sida ku jirta Gentoo.
Kaliya waad iga caawisay inaan sameeyo boodada si aan isugu dayo Arch hal mar (Waxaan doonayay dhowr sano, laakiin marwalba waan joojiyaa tan (tan iyo markii aan bilaabay uruurinta waxaan si fiican u isticmaalaa FreeBSD 😉)).
Waan ku faraxsanahay inay kuu adeegtay 🙂
Isku day MANJARO, Arch loogu talagalay aadanaha
Ku rakibida sida ugu fudud ee Ubuntu
Ka dibna haddii aad rabto, waxaad leedahay dhammaan awoodda qaanso ee aad u qaabeyn karto
Badbaadso waqti badan
Arch _es_ loogu talagalay aadanaha 😉
In kasta oo ay haa tahay, Manjaro si wanaagsan ayaa loo dhisay oo waqti badan ayuu ku keydisaa rakibitaankiisa, maalmo ka hor waxaan isku dayay 0.86 Openbox runtiina si fiican ayey u shaqeysaa, waxaan aad uga jeclahay in ka badan ArchBang!
Dabcan, nooca 'KDE SC' ee Manjaro waa waxa ugu buuran uguna foosha xun ee aan abid arko>: [
Raadinta bini-aadamka hahaha taas ayaa iga qoslisay, runta ayaa ah, rakibidda qaansoleydu ma ahan wax aad u adag, waxay kugu qaadanaysaa waqti uun markii ugu horreysay, laakiin markii aad la qabsato, waxaad uga tagaysaa OS-gaaga sida aad rabto, marka laga reebo inaad haysato archwiki on your android si aad u raacdo! Khadka ayaan uga tagayaa kuwa doonaya! waad salaamantihiin Ariki
Hal su'aal theme Waa maxay dulucda plasma ee aad isticmaasho? Miyaad isticmaali doontaa qtcurve? Smaragd?
Ku jawaab Omar3sau
Waxaan adeegsadaa mawduuca 'OpenSUSE'. Iyo haa, sidoo kale waxaan u isticmaalaa QtCurve.
Mawduuca plasma ee Kde, ma waxaad u jeedaa Produkt? Xaaladdaas marka loo eego kala duwanaanta asalka ah (midabada liinta) ama nooca ay kujirto Openuse 12.3 (codadka cagaaran), haddii kan dambe, ma la wadaagi kartaa?
Haa, waxaan ula jeedaa nooca 'OpenSUSE'. Waxaad kala soo bixi kartaa halkan.
Waan ka xumahay elav, laakiin maxaad u dhiseysaa Arch + KDE kuu gaar ah haddii aad horey u haysatid distoor leh dib u eegis aad u wanaagsan, taas oo ah CHAKRA?
Kaliya waa ogtahay sababta, laga yaabee inaad ergonomized dhamaan talaabooyinkan, laakiin si la mid ah ayaa lagugu qadarinayaa, lagugu daray kuwa ugu cadcad!
Ma jecli inay xukumaan codsiyada aan doonayo inaan rakibo, qaarna waxaan u isticmaalaa GTK. Meelaha lagu keydiyo ee Chakra miyay la mid yihiin kuwa Arch? Haddii kale, aniga iima shaqeyso aniga, maxaa yeelay waa inaan kala soo baxaa xirmooyinka internetka oo isku xirnaheygu iima caawiyo taas. Waxaan u maleynayaa inay kuwani yihiin labada sababood ee ugu waaweyn.
Qaansoleydii 27 dijo
Chackra ISO kii ugu dambeeyay netinstall ayaa lagu daray kaas oo kuu ogolaanaya inaad sameyso rakibo yar, oo la mid ah Archlinux's kdebase. Waxay sidoo kale ka tageen xirmooyinka waxayna hadda kudarsadeen keyd dheeri ah codsiyada GTK.
Laakiin miyaan isticmaali karaa isla meelaha lagu kaydiyo Arch?
Maya, meelaha wax lagu keydsadaa isku mid ma aha. Waxaa jira habab loo isticmaalo, laakiin laguma talinayo.
Waa maxay wax laga xumaado, markaa Chakra ima adeegto 🙁
Oo ma waxaad isku dayday Slackware 14? Waan isku dayay oo KDE waxay umuuqataa XFCE. Runtii waan jeclahay distoorkaas maxaa yeelay waxaad ku hagaajin kartaa dharbaaxada-hel oo waxaad ku dari kartaa ku-tiirsanaanta shaqsi ahaan slackpkg.
Kii ugu fiicnaa: qalabkiisa sifiican loo sameeyay (wuxuu kaa caawinayaa hoos ilaa faahfaahinta ugu yar).
Tijaabada MANJARIO waa Ex Chakra laakiin marka lagu daro fudeydku waa mid badan oo desktop ah oo si buuxda uxiran.
Badbaadso waqti badan oo leh horudhac heer sare ah iyo rakibidda Ubuntu oo kale ah
Soo jeedin yar si markaa markii rakibaadda aasaasiga ah la sameeyo ay u sii ahaato ugu yaraan shaqeyn, waxaa lagu talinayaa in phonon-vlc lagu daro, markaa amarku wuxuu noqon doonaa:
haddii kale tilmaan wanaagsan oo loogu talagalay kuwa aan weli ku dhicin.
Caadi ahaan markaad rakibineyso kde pacman waxay ku weydiineysaa fanaanada aad rakibayso.
Taasi waa sax ... markaad sameyso pacman -S kdebase pacman wuxuu ku weydiinayaa codka aad rabto inaad rakibto ...
Waan jeclahay pacman! 😀
Waqti dheer kahor waxaan lahaa Arch oo leh Gnome, Xfce iyo KDE
Marwalba waan garaacaa cusbooneysiinta weyn waxaanan u beddelay caajisnimo
Laakiin Arch waa Arch, ereyo waaweyn 😉
Isticmaal Slackware. Waa waxoogaa yar, laakiin maaha heerka Arch uu leeyahay.
elav, Waxaan soo jeedinayaa talo: daabacaan hage talaabo-tallaabo ah oo lagu rakibayo Arch oo leh LVM sir ah oo leh taageerada TRIM ee SSD waxaan rabaa inaan ku rakibo Arch laptop-ka, laakiin kuma jiro hagaha rasmiga ah ee rakibaadda kama fikirayaan suurtagalnimada, waxaanan u maleynayaa inay caawin laheyd dad badan. Mahadsanid iyo salaan wacan.
Ku jawaab archdeb
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku caawiyo laakiin ma haysto SSD aan ku tijaabiyo .. 🙁
Hagaag, qaybta SSD waa waxa ugu yar, laakiin waxaan xasuustaa si khaldan waxay ahayd in ikhtiyaar lagu dhigo cryptab, mid kale lvm iyo mid kale qormooyinka. Laakiin rakibida nidaamka 100% ee sirta ah iyo LVM way adagtahay. Waan ku heli karaa haddii aad rabto xiriirin aan lahaa oo sharraxaya hannaanka xoogaa laakiin loogu talagalay Gentoo, way ku caawin kartaa: p
Arch waa mid aad u wanaagsan, laakiin wadada qaanku waa falsafada KISS + RTFM, marka waxaan rakibayaa MATE + Openbox oo Iceweasel u dhigaa biraawsarka asalka ah
Ka sokow, ma jiri doonaa nooca LTS ee Arch si loo isticmaalo?
Isticmaalka ArchLinux mar labaad mahadsanid tilmaamaha rakibidda.
Aynu aragno haddii maalin uun aan isku dayo ARCH, Intaan weli la joogo Mageia 3 oo leh KDE 4.10.4 X86_64 naqshadaha
Ma heli karo ciyaaryahan sida winamp u ah kde D:
qmmp waa mid kamid ah ciyaartooyda leh codka ugufiican ee Linux wuxuuna aad ula mid yahay winamp. Waxay ku qoran tahay qt. Barbaraha waa mid weyn inkasta oo ay jiraan wadiiqooyin yar.
Googling Audacious, ka dibna ii sheeg haddii aad heshay Linux u dhiganta Winamp.
Waxaan la joogay Arch ku dhowaad shan sano iyo ilaa iyo inta labadeyda kumbuyuutar (shaashadda shanta sano ah iyo netbook hal sano jir ah) ay taageerayaan sii deynta qashinka ee 'distro', waxba u badali maayo, markaan u wareejin kari waayo Debian. Waxaan u isticmaali jiray Openbox shaashadda iyo desktop-ka muddo dheer laakiin waan waalanahay oo waxaan ku rakibey KDE buug-yaraha si aan u tijaabiyo. Runtii waan jeclaa KDE waxa xun waxa weeye inuu cuno batteriga, Openbox (kadib markii la qaabeeyey) wuxuu u baahday 10 daqiiqo oo kaliya si ay udhaafto 3-da saacadood ee ay ku jirtay Windows-ka iyo KDE waxay socotaa oo kaliya 2 saacadood iyadoo aan loo eegayn inta barnaamij ama dejinta aan wax ka beddelo.
Ugu dambeyntiina, Arch Linux wuxuu kaa codsanayaa in ka badan ama ka badan dareenka saaxiibbadaada: haddii aadan ku cusbooneysiin wax ka badan bil ka dibna aad go'aansato inaad si lama filaan ah u cusbooneysiiso, way jabaysaa, haddii aad cusbooneysiiso adigoon akhrin warka waa hubaal jebi. Sidaa darteed, ha ka tagin dardaarankan oo haddii aad wax rabto, marka hore hubi sida uu dareemayo
Ku jawaab serfraviros
Way fiicantahay inaad had iyo jeer haysato cd toos ah oo anfacaysa si aad u gasho goobta rasmiga ah oo aad u aqriso sida loo xaliyo su'aasha.
By habka: soo dejinta qaanso !!!!
Distro-kan ayaa indhahayga qabanaya, waxaan arki doonaa haddii usbuucan aan haysto waqti aan ku tijaabiyo.
Ku rakib oo ku xir Qemu-KVM Arch Linux [La cusbooneysiiyay]
PyGTK 3: casharrada mini GUI ee Python + GTK + 3